♫♥✿*ကျွန်မ ရဲ့ နားခိုရာ ♫♥✿*: အသိလေးနဲ့ ကာကွယ်ပါ
ThaiChannel3..ကနေ ကြည့်ုလိုက်ရတဲသတင်းလေးကို မှတ်မိသလောက်လေး ပြန်မျှဝေ အခုခေတ် နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုမှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်နဲ့အမျိုးသမီးတွေ အတင်းအဓမ္မ အကြမ်းဖက် ခံရမှုတွေပိုများလာပါပြီ။
အကြမ်းဖက်ခံရမှုရဲ့ ၇၁ရာခိုင်နုန်းဟာ အသက်၈နှစ်ကနေ ၂၅အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်.. အဓိက ကတော့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ကျာင်းသူလေးတွေ.ပါ ပြစ်မှူကျူးလွန်ကြတာကတော့. သူတို့ လေးတွေရဲ့ အသိမိတ်ဆွေတွေ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းနဲ့ တွဲနေတဲ့ ချစ်သူတွေပါတဲ့ .. ကိုယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့သူတွေပဲ အများဆုံးဒုက္ခပေးကြတာပါတဲ့။
သူတို့နိုင်ငံမှာက ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ကြတယ်ဆိုတာ ရှားတယ်။ ချစ်သူဖြစ်ရင် အတူတူနေကြတယ်။ အလုပ်လုပ်ပြီးပိုက်ဆံစုကြတယ်။ အဆင်ပြေမှာမင်္ဂလာဆောင်ကြတာများတယ်။ တကယ်လို့ ဒီကြာထဲပြတ်သွားခဲ့ရင်လဲ.ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုအေးဆေးပဲ.သူ့ဓလေ့နဲ့ သူတော့ဟုတ်နေတာပေါ့ချမ်းကလဲ သူတို့တွေကိုမေးကြည့်တာပေါ့။ နင်တိုတွေ အခုလိုအတူတူနေတာ မိဘကမပြောဘူးလားဆိုတော့ တို့ အဖေနဲ့ အမေလဲဒီလိုနေလာကြတယ်လေတဲ့....ကောင်းရော..။
တစ်လောက ကြည့်လိုက်ရတဲ့ သတင်းလေးမှာလဲ သမီးရည်းစားတွေဖြစ်တဲ့ ကောင်လေးနဲ့့ကောင်မလေး အတူတူနေပြီးတော့ ကောင်လေးကအပြင်ခဏသွားမယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။နောက်တော့သူ့ သူငယ်ချင်း ၈ ယောက်ကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ပါတယ်။ ငါ့ချစ်သူနဲ့ အတူတူလာနေလို့ ရတယ်ဆိုပြီးတော့.သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လွှတ်ပေးပါတယ်။ကောင်မလေးကလဲမိန်းကလေးအားနဲ့ ဆိုတော့ ၈ယောက် တစ်ယောက်မရုန်းနိုင်ဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကောင်မလေးရဲ့ ချစ်သူကောင်လေးက အခန်းအပြင်မှာ စောင့်ပေးနေတာတဲ့ 
တော်တော်နှမချင်းမစာနာတဲ့သူပဲနော်ပြီးတော့အားလုံးထွက်ပြေးသွားတယ်လေ။ကောင်မလေးမိဘတွေလဲ ရှက်လွန်းလို့ ငိုလိုက်တာအရမ်းပဲသူတို့ နိုင်ငံမှာကမှုခင်းသတင်းမှန်သမျှတစ်နိုင်ငံလုံးသိအောင်လွှင့်တော့. တခြားသူတွေလဲသံဝေဂယူပြီးဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့။
ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိလေးနဲ့ ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာ ပြောပြမယ်နော်။
ကျောင်းဆင်းချိန်ရုံးဆင်းချိန်မှန်ပါစေ.။ တကယ်လို့ အချိန်ပို၇ှိရင်လဲ၇ှိတဲ့အကြောင်းအိမ်သားတွေကို အသိပေးထားပါကိုယ့်ရဲ့ ညီမလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကျောင်းကြိုကျောင်းပို့ လုပ်ခိုင်းပါ။ မကြိုနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့.ကျောင်းပြန်ချိန်ကိုသတ်မှတ်ထားပေးပါ။ ကျောင်းလွှတ်တာ၃နာရီဆိုလို့ ရှိရင်. ၃နာရီခွဲအိမ်အရောက်ပြန်ခိုင်းပါ.
်အုပ်စုလိုက်သွားပါ။ခ၇ီးလမ်းမှာသူငယ်ချင်း အချင်းချင်း စိတ်ဝမ်းမကွဲပါစေနဲ့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးဂရုစိုက်ပါ။
ချမ်းတို့ ကျောင်းတက်တုန်းကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောပြဘူးတယ်.အရက်မူးနေတဲ့ အဖေက သမီးအရင်းကိုစော်ကားတာတဲ့ .အဲ့ဒါပတ်ဝန်းကျင်က ပြောတော့...အဲ့ဒီအဖေမပီသတဲ့ လူကလေ..
.မကောင်းတာတွေ့ ရင်လမ်းမှန်ကို ပြုပြင်ပေးသင့်ပါတယ်...တားသင့်ပါတယ်.
ချမ်းတို့ ကျောင်းတက်တုန်းကဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းပါ...ချမ်းတို့ အနီးကပ်တက်နေတဲ့ အချိန်မှာ
ရေးတဲ့ ဆရာတော်နာမည်မေ့နေလို့ ခွင့်လွှတ်ပါ....
ဲ့ မင်းသမီးလေးရဲ့ ပိုစ့်လေးတစ်ခုကို .ဒီပိုစ့်နဲ့ အတူတွဲတင်ပေးထားမယ်နော်.ပိုစ့်နာမည်က (ဆူး) တဲ
``ဟိတ်…ညီမလေး ဈေးကိုလား စောလှချည့်လား ´´
``ဟယ်….မမမျိုးမျိုး မတွေရတာတောင် တော်တော်ကြာနေပြီ ကလေးရော နေကောင်းရဲ့ လား
``အောင်မလေးတော်……ဖြေးဖြေးမေးပါ မေးခွန်းတွေကလည်း အများကြီးပဲ ဘယ်ကစပြီး
``မယူပါဘူးမမမျိုးရယ် ချစ်သူကတော့ ယူဘို့ ပြောနေပြီ အိမ်မက်ထဲမှာ…ဟိဟိ.´´
``အကောင်းမှတ်လို့ နားထောင်တာ တော်တော်နောက်တယ် မမသွားတော့
``ညီမလေး ယောင်္ကျားတွေကို မယုံပါနဲ့ မမမျိုးကိုကြည့် သူကအိမ်ထောင်သည် မမမျိုးစိတ်ဝင်စားပါ့
``မမမျိုးရဲ့ အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ညီမလေးတို့ မမှားရအောင် ရင်နာနာနဲ့ ပြောနေရတာပါ တစ်ည မမမျိုးနဲ့ 
``မမမျိုးလို မဖြစ်အောင် ဘယ်ယောင်္ကျားလေးကိုမှ အယုံမလွယ်ပါနဲ့ ညီမလေး
written By ...Princess(www.thettantvillage.com)
အပင်ပန်းခံပြီးဖတ်၇ှုအားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
စာဖတ်ရတာ မောသွားရင် အပြင်းဖြေ အညောင်းပြေ ကော်ကော်တိုက်မယ်နော်..
သောက်ဖူးတဲ့ သူလဲ ထပ်ယောက်လို့ ရတယ်နော်.
ဒီလင့်လေးကို ..နှိပ်လိုက်ပါ..ကြိုက်တာ ထည့် ပြီးသောက်နော်..Free....
သူငယ်ချင်းတို့ ပေးတဲ့Credit လေးတစ်ခုဟာ စာရေးသူအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးပါ..
Written By ရွာသူလေးချမ်းချမ်း ရင်တွင်းဖြစ် at 10:01 AM
Labels: ရင်သို့ ထိသောစာ